Ny kilasy telo ao an-tsaina dia ireo izay tamin'ny faran'ny manvantara dia tao anaty capricorn, sagittary, scorpio.
Vol. 5 AUGUST, 1907. Tsia
Ny PERSONALITIANA dia avy amin'ny fakany roa kambana, isaky ny, amin'ny alàlan'ny, ary sonus, hitsoka. Persona no saron-tava na akanjo nentin'ilay mpilalao sarimihetsika. Dia mahazo ny teny toetra isika. Ny toetran'ny olona, ​​izay natsangana ary ampiasain'ny tsirairay avy, ny saina avo kokoa, ny manas, hifanerasera amin'izao tontolo izao, fa tsy vao haingana. Ny fiandohany dia eo amin'ny fiandohan'ny tantaran'ny an'izao tontolo izao.
Ny teny toetra dia ampiasain'ny besinimaro ary na dia ny theosophista aza tokony mahalala ny fahasamihafana, satria mampiavaka ny olona sy ny maha-izy azy izy ireo. Ny toetra aman-toetra dia tsy zavatra tokana na singa iray; Izy io dia fitambaran'ireo singa maro, sy saina ary foto-kevitra izay miseho miaraka ho iray. Ny tsirairay tamin'izy ireo dia naka fotoana nivelarana. Na dia amina faritra maro aza ny toetra, ny zavaboary dia mifototra indrindra amin'ny loharanom-baovao roa, ny saina mitsoka, na ny fofon'aina (♋︎), ary ny saina, na ny olona (♑︎).
Tsara ny manadihady ny zodiak rehefa mifandraika amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny olona, ​​satria ny zodiak dia rafitra izay nananganana ny olombelona. Rehefa ankasitrahana ny zodiaka dia afaka mianatra momba izay ampahany na fitsipiky ny olombelona na izao rehetra izao amin'ny alalany manokana. Ny famantarana rehetra ao amin'ny antsasaky ny zodiaka dia misy ifandraisany amin'ny fanamboarana ny maha-olona, ​​fa ny marika famantarana (♋︎) ary capricorn (♑︎) no tena mpamorona azy. Ny olona rehetra izay tsy mahatsiaro tena dia avy amin'ny homamiadana (♋︎); izay rehetra takatry ny saina ho an'ny toetra dia avy amin'ny capricorn (♑︎). Andao hodinihintsika fohifohy ny tantaran'ny toetran'ny zodiak.
Araka ny voasoratra ao amin'ny lahatsoratra teo aloha momba ny zodiaka, ny tanintsika dia maneho ny boribory fahefatra na vanim-potoana fivoarana lehibe. Amin'ity vanimpotoana fahefatra ity dia ny fivoarana lehibe na lafin-javatra fito an'ny olombelona. Ny efatra amin'ireo hazakazaka (♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎) ireo dia nandalo tamin'ny vanim-potoana niainany, ary ny sisa rehetra tamin'ny fahefatra dia nanjavona. Ilay hazakazaka lehibe dimy (♏︎) fahadimy lehibe dia novolavolaina tamin'ny alàlan'ny fizarazarany manerana izao tontolo izao. Izahay dia ao amin'ny sokajy fahadimy fahadimy (of) amin'ny hazakazaka fahadimy (koa (). Manomboka any Etazonia ny fanomanana sy fanombohana amin'ny hazakazaka fahenina. Ny hazakazaka lehibe voalohany dia ny homamiadana (♋︎).
Ny sary 29 dia natsangana avy amin'ny lahatsoratra teo aloha mba hahitana ny fivoaran'ny hazakazaka ary mazava kokoa ary ny toerany ao anatin'ny rafitry ny zodiak. Amin'ny alalàn'izany dia azo zahana amin'ny lalan'ny toetran'ny tena manokana, ary indrindra ny fifandraisany sy ny fifandraisany amin'ny famantarana famantarana ny homamiadana (♋︎) ary capricorn (♑︎). Figure 29 mampiseho ny boriborintany fahefatra miaraka amin'ny fotony fito sy hazakazaka fito. Ny zodiaka kely tsirairay dia maneho hazakazaka miorim-paka, ary ireo tsirairay ireo dia aseho fa manana ny mari-pahaizana famantarana na hazakazaka ambanin'ny tsipika marindrano.
Ny hazakazaka lehibe voalohany dia atolotry ny homamiadana famantarana (♋︎). Ny fofonain'io hazakazaka io. Tsy nanana endrika toy ny olombelona ankehitriny izy ireo. Toy ny fofonaina tahaka ny kristaly izy ireo. Karazana karazana, kilasy, baiko na ambaratonga fofonaina, karazana isan-karazany, kilasy na filaharana, izy ireo no modely mifanaraka amin'ny hazakazaka mifanandrify amin'ny hoaviny, ary ny fizarazarana mifanaraka amin'izany fifaninanana izany. Ity hazakazaka voalohany ity dia tsy maty tahaka ny hazakazaka izay narahina; ary io no hazakazaka tsara tokony harahin'ireo.
Tamin'ny nanombohantsika, ny fahefatra, boribory, ny hierarchy homamiadana (♋︎) amin'ny hazakaza voalohany (♋︎) dia narahin'ny hierarchy leo (♌︎) izay fizarana faharoa tamin'ity hazakazaka voalohany ity, sy ny sisa ny hierarchie hafa izay asehon'ny famantarana azy virgo (♍︎) sy libra (♎︎), scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), ary capricorn (♑︎). Rehefa nahatratra ny haizin'ny fofonaina (♋︎) ny hazakazaka capricorn (♋︎), dia nanamarika ny faran'ny vanim-potoana, ny capricorn (♑︎) no fahatanterahana ho lavorary amin'ny hazakazaka manontolo, ary ny fitambaran'ny herin'ny homamiadana (♋︎). tamin'ity hazakazaka voalohany ity, dia teo amin'ny fiaramanidina iray ihany izy ireo.
Rehefa nanjaka ny ambaratonga fahefatra, libra (♎︎), ny hazakazaka fofonaina (♋︎), dia namelona ny tenany izy ireo ary namoaka azy avy amin'ilay hazakazaka lehibe faharoa, ilay hazakazaka (♌︎) faharoa, izay nandalo ny dingana na ny ambaratonga fito. araka ny nomarihin'ny hierarchies ny firazanana (♋︎). Saingy raha ny fofonaina (♋︎) dia toetra mampiavaka ny hazakazaka manontolo (♋︎), ny toetra mampiavaka ny hazakazaka faharoa, ny aina (♌︎), dia nanjaka tamin'ny hazakazaka manontolo (♌︎). Rehefa nahatratra ny famantarana farany na ny mari-pahaizana (♑︎) ny hazakazaka faharoa na ny fiainana (♑︎), tsy toy ny hazakazaka voalohany, nanjavona tanteraka. Rehefa nahatratra ny ambaratonga voalohany azy ny hazakazaka niaina, nanomboka namoaka ny hazakazaka fahatelo izy, izay hazakazaka endrika (♍︎), ary rehefa namolavola ilay hazakazaka fiainana (♌︎) ny endrika. ) ny hazakazaka dia azon'izy ireo. Ireo hazakazaka voalohany (♍︎) voalohany voalohany dia avaravo, toy ny ampahany voalohany amin'ny hazakazany fahatelo (♍︎). Saingy tamin'ny tapany farany tamin'ity taranja fahatelo ity dia nanjary mafy orina kokoa izy ireo ary farany ara-batana.
Ilay hazakazaka fahefatra, hazakazaka (♎︎), hazakazaka voalohany, nanomboka teo antenatenin'ny hazakazaka fahatelo na na (♍︎). Ny hazakazaka fahadimy, ny hazakazaka (♏︎), dia nanomboka teo antenatenin'ny hazakazaka fahefatra (♎︎) ary natsangan'ny firaisana firaisana. Ankehitriny, mba hahitana ny fifandraisana misy eo amin'ny hazakazaka fahefatra sy fahadimy miaraka amin'ilay hazakazaka tsara indrindra voalohany, sy ny toerana ijoroanay eo amin'ny fampandrosoana.
Raha namelona ny faharoa ny hazakazaka voalohany, dia niaina ny hazakazaka (♌︎), dia toy izany koa ny hazakazaka manaraka ny ohatra nasehony azy ireo, namoaka ny hazakazaka fahatelo izay namorona endrika. Tamin'ny endriny voalohany ireo endrika ireo, saingy nihena tsikelikely izy ireo rehefa nanakaiky na nahatratra ny làlany. Ny endrik'izy ireo avy eo dia antsointsika ankehitriny hoe olombelona, ​​fa tsy mandra-pahatongan'ny hazakazaka fahefatra, izy ireo dia namorona tamin'ny alalan'ny fiterahana. Nanomboka tamin'ny afovoan'ny hazakazaka fahatelo ny fifaninanana fahefatra, ary teraka teo antenantenin'ny hazakazaka fahefatra ny taranja faha-dimy.
Nandritra ireo vanim-potoana ireo, ny fofom-bavan'ny fofonaina dia niambina sy nanampy tamin'ny fampandrosoana ny firazanany tsirairay avy, araka ny ambaratongam-pahefana mety azy ary araka ny ambaratongam-pahefana. Ny hazakazaka miaina dia tsy niaina tamin'ny tany matevina tahaka ny vatantsika; izy ireo dia nipetraka tao anatin'ny tontolon'ny asa izay ary mbola manenika ny tany. Ny hazakazaky ny fiainana dia nisy tao anatin'ny faritra fofonaina, saingy nanodidina ny tany ihany koa izy. Rehefa nivoatra ny haim-piainana dia namorona vatana, ny hazakazaka virgo (♍︎) dia ny endrika haingam-pon'ny fofonaina (♋︎) dia namboarina avy amin'ny toerany izay nanjavonan'ny hazakazaka niainana na voasarona. Ny endrika astral izay tena nokendrena dia nipetraka tao amin'ny habakabaka tao anatin'ny tontolon'ny fiainana, izay mety hitovizantsika amin'ny habakabaky ny tany. Rehefa nanjary nihamaina sy natanjaka izy ireo dia niaina toy ny ataontsika eto an-tany mafy. Ny fofon'aina manontolo dia azo lazaina fa ra razamben'olombelona, ​​fantatra ao amin'ny Secret Doctrine hoe "bharishad pitris." Saingy amin'ny kilasy na sarin'andriana "ny ray" dia hantsoinay ny kilasy izay nampisy ny adala. mamolavola kilasy virgo (♍︎) na hierarchy pitris bharishad. Ny endrika dia mamelona ny fiainana toy ny zavamaniry ary miteraka ny tenany amin'ny alalàn'ny metamorphosis mitovitovy amin'ny an'ny lolo. Fa ireo endrika mamorona, miadana tsikelikely firaisana ara-nofo. Tamin'ny voalohany dia ilay vehivavy ho virgo (♍︎), ary avy eo, rehefa nipoitra ny faniriana dia novolavolaina tao amin'ireto endriny ireto ny taova lahy. Avy eo nateraky ny firaisana amin'ny firaisana. Nandritra ny fotoana iray dia voafaritry ny vanim-potoana na ny fihodinana azy io, ary fehezin'ny hazakazaka mendrika amin'ny fofonaina.
Hatramin'izao vanim-potoana izao, ny maha-olombelona dia tsy manana saina. Olombelona ny endrik'olombelona, ​​fa amin'ny lafiny hafa rehetra dia biby izy ireo. Notarihin'ny faniriany izay biby madio; fa, toy ny an'ny biby ambany, ny fanirian'izy ireo dia ny karazana azy ary voafehin'ny tsingerin'ny vanim-potoana. Biby voajanahary mihetsika arakaraka ny toetrany ary tsy menatra. Tsy nanana ny toe-tsaina izy ireo satria tsy nahalala ny fomba fihetsika ankoatry ny faneren'ny fanirian'izy ireo. Izany no toe-piainan'ny olombelona ara-batana araka ny voalazan'ny Baiboly ho Sahan'i Edena. Hatramin'izao fotoana izao, ny olombelona biby dia manana ny fotokevitra rehetra ananan'ny olombelona ankehitriny, afa-tsy ny saina ihany.
Raha ny marina, ny hazakazaka voalohany dia namelona ny hazakazaka faharoa na fiainana, ary ny hazakazaka velona dia namoaka ny hazakazaka fahatelo izay niforona. Avy eo ireo endrika ireo, manamafy sy mandrisika ny haim-piainana, dia nanangana vatana ara-batana manodidina azy. Avy eo maniry ny hifoha ianao ary lasa mavitrika amin'ireo endrika; izay ivelany dia mihetsika avy ao anatiny. Ny fofonaina dia manetsika ny faniriana, ny faniriana manome lalana ny fiainana, ny fiainana maka endrika, ary ny endriny dia manelingelina ny zavatra ara-batana. Ny tsirairay amin'ireto vatana na fitsipika ireto dia ny fanehoana fatratra ny karazana tsara fofonaina, samy araka ny karazany.